Shiinaha L-Threonine CAS 72-19-5 oo loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha 'Pharma Grade' (USP) | Salaad
Magaca Badeecada: L-Threonine
CAS MAYA.: 72-19-5
Sida quudinta nafaqada, L-threonine (Abbreviated Thr) ayaa badanaa lagu daraa calafka doofaarka iyo digaaga. Waa amino acid xaddidan oo ku jira quudinta doofaarka iyo tan saddexaad ee xaddidaysa amino acid ee digaagga quudinta.
1. Badanaa waxaa loo isticmaalaa kaabis cunto ahaan.
2. Waxaa loo adeegsaday quudinta nafaqada. Waxaa badanaa lagu daraa calafka doofaarka iyo digaaga. Waa amino acid xaddidan oo ku jira quudinta doofaarka iyo tan saddexaad ee xaddidaysa amino acid ee digaagga quudinta.
3. Waxaa loo adeegsaday kaabis nafaqo waxaana loo adeegsaday diyaarinta isku darka dhiigga amino acid.
4. Waxaa loo adeegsaday daweynta adjuvant ee boogta qalooca waxaana sidoo kale loo isticmaalay in lagu daweeyo dhiig yari, angina, aortitis, wadno yaraanta iyo cudurada kale ee nidaamka wadnaha.
L-Threonine waxaa lagu sameeyaa halsano microbial ah oo leh glucose sida alaabta ceeriin, ka dibna waa la sifeeyaa ka dib marka sifeynta xuubka, fiirsashada, crystallization, qalajinta iyo habab kale. Iyada oo ku saleysan halsano jeermiska, L-threonine waa mid amaan ah oo la isku halleyn karo iyada oo aan laga helin haraaga dhinaca sunta ah waxaana laga heli karaa noocyo kala duwan oo quudin ah (oo ay ku jiraan quudinta shirkadaha beeraha u janjeera dhoofinta) si loogu isticmaalo ammaan. Maaddaama ay tahay amino acid muhiim ah, L-Threonine waxaa si ballaaran loogu dabaqayaa waxyaabaha lagu daro cuntada, nafaqeynta cuntada iyo daawooyinka iyo wixii la mid ah.
Marka lagu daro cunnada, L-threonine waa aalad awood leh oo gacan ka geysaneysa hagaajinta tayada quudinta iyo yareynta qiimaha quudinta ee soo saarayaasha quudinta. L-Threonine waxaa si ballaaran loogu daray quudinta doofaarka, quudinta doofaarka, digaaga digaaga, quudinta shrimp iyo quudinta eel oo ay weheliso guud ahaan lysine. L-Threonine wuxuu ka ciyaaraa doorkiisa siyaabo badan sida ka caawinta isku dheelitirka dhismaha amino acids si loo dardar galiyo koritaanka, sare u qaadida tayada hilibka, culeys qaadashada iyo u tiirsanaanta boqolkiiba hilibka, hoos u dhigida saamiga isku beddelka quudinta, xoojinta nafaqada ee feedstuffka oo leh liidashada liidata ee amino acid, caawinta waxay ilaalinaysaa kaydka borotiinka waxayna yareyneysaa kharashka quudinta iyada oo la goynayo borotiinnada lagu daro quudinta, yareynta nitrogenka laga saaray xoolaha, kaadida iyo ammonia iyo sidoo kale sii deynta xoolaha iyo meelaha digaagga, iyo ka qayb qaadashada xoojinta xoolaha yaryar habka difaaca jirka si looga hortago cudurka.
Baaritaan 98.5% ~ 101.5%
Qiimaha PH 5.0 ~ 6.5
Khasaare ku saabsan qalajinta ≤0.2%
Hadhaaga dabka ≤0.4%
Amino acids kale Iswaafajiya
Wareeg gaar ah -26,7 ° ~ -29,1 °
Hore: L-Methionine CAS 63-68-3 ee Fasalka Pharma (USP)
Xiga: L-Isoleucine CAS 73-32-5 ee Fasalka Pharma (USP / EP)
Fasalka Cuntada L-Threonine, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, Fasalka L-Threonine Pharm, Nafaqada xoolaha,